ဆူနာမီဒုက္ခသည်များအတွက်အိမ်သာထဲတွင် ယန်း ၁၀ သန်း (ဒေါ်လာ ၁သိန်း
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရက်ရောလှသည့် အမည်မသိ အလှူရှင်တစ်ဦးက ယခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ဂျပန်ငလျင်
နှင့် ဆူနာမီဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီကယ်တင်နိုင်ရန် လှူဒါန်းငွေ ယန်း ၁၀သန်း ( ဒေါ်လာ ၁သိန်း ၃
သောင်း ) ကို အများပြည်သူသုံးအိမ်သာတစ်ခုထဲတွင် ချထားလှူပစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဈေးဝယ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်အိတ်အတွင်းထည့် သွင်းထားသည့် အဆိုပါ အလှူငွေအထပ်
လိုက်ကြီးကို တိုကျိူမြို့ မြောက်ပိုင်းရှိ ဆာကာဒို မြို့ ခန်းမရဲ့ မသန်မစွမ်းသူများအတွက်ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်
ထားသည့် အိမ်သာအတွင်းတွင် တွေ့ ရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...
အလှူငွေစက္ကူများနှင့် အတူထိုအမည်မသိအလှူရှင်ရေးထားသည့် စာတွင် " ကျွန်တော်ဟာတစ်ကောင်
ကြွက်ပါ...ရှေ့ ဆက်ဘ၀မျှော်မှန်းချက်လည်းမရှိတော့ တာမို့ တိုဟိုကူ အရပ်မှပြည်သူများအသုံးပြုနိုင်ရန်
ဤငွေများကို ထားရစ်ခဲ့ ပါသည်..." ဟုဖေါ်ပြထားပါတယ်...
တိုဟိုကူဒေသ ဟာ လွန်ခဲ့ သည့် မတ်လကဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် လူပေါင်း ၂ သောင်း သေဆုံးခဲ့ သောငလျင်နှင့် 
ဆူနာမီဘေးအပြင်းအထန်ခံခဲ့ ရသည့် နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်...
ထိုငွေကိုသုံးလအတွင်းလာရောက်မတောင်းဆိုပါက ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ 
မြို့ ရဲ့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပြောကြားပါတယ်...
" ဒီကိစ္စမှာ မည်သူမည်ဝါထားရစ်ခဲ့ တာကို မြင်တွေ့ တဲ့ မျက်မြင်သက်သေမရှိတာမို့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်
လိုလူမျိူးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့ မခန့် မှန်း၊ မမှန်းဆနိုင်ပါဘူး...
ကျွန်မတို့ တော့ တစ်ကယ့် ကိုအံ့ အားသင့် မိပါတယ်....အခုလိုစေတနာကောင်းနဲ့ လှူဒါန်းတာမို့ ကျွန်မတို့ 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..." လို့ ထိုမြို့ တော်ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူအမျိူးသမီးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 11:02 AM |
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကို တစ်ကောင်ကြွက်ရယ်။
watch out "www.peoplemediavoice.com'' Ko Peter, with respect.
အလှူငွေအတွက် အမျှဝေစရာမလိုပေမဲ့ -
သာဓု သာဓု သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ-
Man told court prostitute turned into donkey
Cradle-snatcher! Indian man, who says he's 120, ti...
Myanmar Music Concert 2011 To Be Held In Dubai
Disabled goat learns to walk on front legs
Man with gigantic testicles
Christian girl, 12, kidnapped, beaten until she co...
Boy, 11, sets longest limbo skating-world record
Are you sure this is the right way? Thrillseekers ...
Meet the real 'Big Foot'
Floating Filipino Government Officials,
Floating Chinese Government Officials Inspect New ...
Contortionist with an extra string to her bow: Ups...
Holy men of India, very colorful characters
Bashful benefactor leaves 10 million yen ($130,000...